Home Wararka Nuur Samawad oo ka tirsanaa ciidanka Gaashaan oo shaqada laga ceyriyay? Sabab
Nuur Samawad oo ka tirsanaa ciidanka Gaashaan oo shaqada laga ceyriyay? Sabab
Nuur Samawad oo ahaa askari katisanaa ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa shaqada laga eryay kadib markii uu dhawaan Wareysi uu siiyay mid kamid ah telefishinada afka Soomaaliga ku hadla.
Sida loo xaqiijiyay MOL Nuur Samawad oo ka tirsanaa ciidanka Nabad sugida gaar ahaan Gaashaan ayaa ku dhaawacmay weerar Al Shabaab sanadkii hore ku qaadeen Hotelka Naasa Hablood 2-, waxaana Nuur uu kamid ahaa ciidankii u gurmaday hotelka kasoo gaaray dhaawac halis ah.
Askarigan katirsanaa ciidanka sida gaarka ah u tababaran ayaa mudo la jiifay lana ildarnaa dhaawac halis ah oo ka soo gaaray weerarka Hotelka Naasa Hablood, waxa uuna sheegay in xaaladiisa dalka wax looga qaban waayay uuna gurmad ka waayay Hay’ada NISA iyo dowlada.
Wareysiga uu bixiyay askarigan dhaawacan ayaa sabab u noqday in gabi ahaanba laga saaro shaqada ciidanka NISA, waxa uuna Wareysi kale uu bixiyay ku sheegay Nuur in lagala wareegay ID-carkiisa loona sheegay in shaqada NISA laga tir tiray.
Previous articleWaxgaradka K/galbeed oo ka digay in Ciidamada Amniga Maamulkaasi la xaqiro
Next articleQarax caawa ka dhacay Magaalada Baydhabo iyo waxyeelo kasoo gaartay Ex-Xildhibaan Macalin Nuur Xasan Ibraahim
Madasha xisbiyada qaran oo sheegay in uu burburay heahiiskii Farmaajo